Villa Soomaaliya oo looga digay fashilinta shirka Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
Villa Soomaaliya oo looga digay fashilinta shirka Dhuusamareeb
Axsaabta Mucaaradka dalka ayaa ka wal-walsan muddo kororsiga laga cabsi qabo ee maamulka Farmaajo.
Muqdisho, Soomaaliya – Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa Madaxtooyada Soomaaliya uga digay fashilinta shirka Dhuusamareeb ee lagu balansanyahay 15 bisha soo socto ee Agoosta.
Shakuur ayaa sheegay in rajada kaliya ay ummadda Soomaaliyeed hada leeyihiin ay tahay qabsoomidda shirka Dhuusamareeb, kaas oo ay isku mowqif ka yihiin saamileyda siyaasadda dalka iyo Beesha Caalamka, islamarkaana taageersanyihiin.
Waxaa uu sheegay in Villa Soomaaliya ay ka digtoonaato fashilinta shirkaan, oo aysan dalka u horseedin jahwareer iyo khalalaaso siyaasadeed, isagoona intaa ku daray in waddanka uu ku jiro marxalad kala guur ah, loogana faa’iidaysan xaaladan.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo muuqal uu bartiisa facebook soo dhigay kagag hadlayay arintaan ayaa sidoo kale sheegay in madaxtooyada ay haatan waddo qorsho muddo kororsi ah, kaas oo ay wax walbo u sameyneyso, balse aan marna laga aqbaleyn.
Shirka Dhuusamareeb ayaa la filayaa in uu dhaco 15 bisha soo socto, waxeyna dowladda Soomaaliya sheegtay in ay ka qeyb geli doonaan Axsaabta Mucaaradka.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale maalinimadii shalay aheyd soo bandhigtay xubnaha Guddiga Farsamada ku meteli doono shirka Dhuusamareeb, kuwaas oo ka kooban lix xubnood, shan ka imaaneyso dhinaca Federaalka iyo gobolka Banaadir.
Waxaana xusid mudan in isla shalay ay Golaha Wasiirrada meel mariyeen xubnaha guddiga farsamada heer Federaal iyo Heer Dawlad Goboleed ee ka baaraan degaya talooyinka la xiriiri hannaanka iyo habsami u socodka doorashootinka dalka, ka hor shirka Dhuusamareeb oo ku began 15 Agoosta.